Isikhokelo esiphezulu seNolvadex ukunyanga umdlavuza webele
Julayi 18, 2019
Yonke into malunga neNolvadex
1.Yintoni i-Nolvadex? Ingaba isebenza kanjani? 2. I-Nolvadex isebenzisa
I-3.Nolvadex isilinganiso Iziphumo ze-4.Nolvadex
5.Nolvadex isigamu-ubomi I-6.Nolvadex
7.Nolvadex inzuzo Uhlolo lwe-8.Nolvadex
9.Nolvadex ukuthengiswa 10.Nolvadex ukunyanga ukungabikho komntwana kwintombi
1. Yintoni i-Nolvadex? Ingaba isebenza kanjani?
Okwangoku, umdlavuza webele usinye sezifo ezixhaphakileyo ezibangelwa ngabafazi. Uninzi uphando lwenziwe kwaye lusenziwa kwizidakamizwa ezinokunceda umntu aphile ubomi obungenamdlavuza. Nolvadex (54965-24-1) yenye yezonyango eziye zabonakalisa zinenzuzo ekukhuseleni nasekunyangeni kwe-cancer yombele. Ngaphandle kokuba i-affordability yayo ifumana indawo kwindawo yehlabathi.
Nolvadex (54965-24-1) yipilisi yomlomo eye yaphumelela kunyango lwezigulane ezineemhlaza zomhlaza. Kufunyenwe kwi-1966, kwaye isifundo sayo njengesichengululo somhlaza wesiqalo se-1970. Kwi-1998, yaba yicala lokuqala ukufumana imvume evela kwi-FDA ukunceda ukukhusela umdlavuza webele. Uphando luye lwabonisa ukuba uNolvadex unciphise amathuba okubandezeleka ngumhlaza wesibele nge-50% kubafazi ababesengozini enkulu yokuphuhlisa.
Ukuze uqonde indlela uNolvadex asebenza ngayo, kufuneka ukwazi ukuba iiseli zomhlaza zesifuba zifuna ihomoni yowesifazane eyaziwayo njenge-estrogen ukuba ikhule iphindwe. I-Tamoxifen, ngoko, iyakwazi ukunqanda oku ngokukhuphisana ne-estrogen ekubopheleleni kwi-esrogen receptors kwiiseli zomhlaza zesisu.
I-Nolvadex (i-54965-24-1) ibhekiswa ngokusemthethweni njengendlela yokumisela i-estrogen receptor modulator (SERM). Ngoko ke, ukunciphisa ukukhula nokuveliswa kweeseli zomhlaza zesisu ngokuthintela isrogen kwisibele.
Ngaphandle kwe-Nolvadex ukulwa nesrogen kwimaseli omhlaza webele, kwakhona ikopisha iziphumo ezintle ezibangelwa yi-estrogen kwinkqubo yomzimba. Kubafazi be-postmenopausal abahlala kwi-tamoxifen, kunokunciphisa ingozi yesifo senhliziyo kwakunye ne-osteoporosis (imeko ebangela ukuba kuqhube amathambo) ngaphandle kokufumana unyango oluthathekileyo lwe-hormone.
2. I-Nolvadex isebenzisa
I-Nolvadex isetyenziswe ukususela kwiminyaka ekunyanga kweemeko ezahlukahlukeneyo. Kuza njengomsindisi kunye neninzi yamadoda nabasetyhini abanezifo ezincinane kwixesha lokuphila kwabo. Nazi ezinye ze I-Nolvadex isebenzisa owenze ukuba kuvele;
I-Nolvadexmay imiselwe kumabhinqa nabasetyhini njengonyango lwe-lymph node okanye i-lymph node-negative negative breast cancer emva kokuba sele behlinzwa ngokuphumelelayo. Ukusetyenziswa kwe-Nolvadex kuye kwabonakalisa kunenzuzo xa uxhathisa umdlavuza onesiqiniseko se-estrogen kunye ne-progesterone receptors. Nolvadex inciphisa umngcipheko wesifo somhlaza esidluliselwa kwisifuba esahlukileyo.
Amadoda nabasetyhini abanomdlavuza wesisu (isifo somhlaza esasasazeka) sinokumiselwa ngeNolvadex.
Abasetyhini abanesifo se-ductal carcinoma in situ (DCIS) kwaye sele sele bafumana unyango kunye neyeza zonyango banganceda kule nkunkuma. Kule meko, i-Nolvadexmay inciphisa umngcipheko wokubandezeleka kwesifo somhlaza wesibeleko. Umngcipheko kunye nenzuzo yokuba le nyango kufuneka, nangona kunjalo, kuxoxwa ngaphambili.
Abasetyhini abasemngciphekweni omkhulu wokuba nomdlavuza webele, banokumiselwa kunye neziyobisi ukuncedisa ukuba unakho. Ubungozi kunye neenzuzo zokuba le nyango kufuneka, nangona kunjalo, kuxoxwe ngazo kweli phepha.
Enye yeNolvadex engaqhelekanga isebenzisa unyango lomhlaza we-ovari.
3. I-Nolvadex isilinganisi
I-Nolvadex isilinganisi akumele iphakame kakhulu ukuba isebenze; yi-SERM enamandla esebenza kakuhle kumlinganiselo ophantsi. Ukonyango, okuqhelekileyo I-Nolvadex isilinganisi I-10-20mg, elawulwa kabini imihla ngemihla.
Imiphumo ye-anti-estrogenic nepro-testosterone, i-Nolvadex isilinganisi kufuneka ibe phakathi kwe-10-40mg ngosuku. Umlinganiselo owukhethayo kuxhomekeke kubukhulu bakho, iinjongo, kunye nesixa sexesha ofuna ukuba kuyo.
Kuhle ukuba uqaphele ukuba i-Nolvadex ephezulu isilinganisi ayithethi enye impembelelo emihle. I-10-40 mg iya kunika impembelelo ebalulekileyo kunye ngokukhawuleza oyifunayo ekunciphiseni imiphumo eyingozi yokuthatha i-anabolic steroids.
Akukho zigqibo ezizodwa ezithathwe malunga nokulawulwa kweNolvadex. Kukhethiweyo ukuwuthatha phambi, emva, okanye ngexesha lokutya. Unokukwazi nokuba nayo kusasa okanye ngexesha lobusuku. Maxa wambi kucetyiswa ukuba akufanele uhlukanise umlinganiselo we-Nolvadex.
4. Iziphumo zeNolvadex
I-Nolvadex ibangela ukukhuselwa komhlaza yilezona zinto zingcono zifaniswe nezinye iziyobisi zomhlaza. Iziphumo zibonisa ukunciphisa i-50% kwabasetyhini abaye baphathwa ngenxa yomhlaza wesibeleko ongabonakaliyo kunye nokungabonakaliyo. Ukuthatha ixesha eliyiminyaka emihlanu ukuya kweyishumi kuye kwafakazela ukunciphisa ukuphindaphinda kwesifo somhlaza esifanayo kunye nomngcipheko wesinye isifuba.
I-Nolvadex nayo yenza isisombululo esihle kakhulu kunyango lwe-gynecomastia kokubanjiswa njengesilwanyana sokuthintela kunye nokuphulukiswa kwangaphambili kwenkqubo yophuhliso lokuqala. Kwisifundo esingahleliyo esenziwa kwizigulane ezilishumi kwinyanga enye, ezisixhenxe zazo zafumana ukuhla kwexabiso lobubele babo. Abine kubo abaye bavalelwa yi-gynecomastia ebuhlungu babenokufumana uxolo. Kwakungekho netyhefu ebhaliweyo.
Kwakhona kunika iziphumo ezintle kwi-stimulation ye-Testosterone ukuveliswa njengoko kuye kwabikwa ukuba ubuyele kwisidalwa emva kweeveki ezine.
5. Nolvadex isigamu-ubomi
The Nolvadex isigamu-ubomi lide lide lithelekiswa namanye amaqumrhu omlomo. Kusele iintsuku ezintlanu ukuya kwi sixhenxe kunye nezifundo ezithile ezibonisa ukuba i-half-life Nolvadex ihamba ixesha elide elinesine elinesine.
6. I-effects ye-Nolvadex
I-Nolvadex yilezi ziza zenziwe ngaphezu kweminyaka engama-50 edlulileyo, kwaye akumangalisi ukuba yonke into yayo ifundwe ngokwaneleyo. Iineenzuzo ezininzi, kodwa zikhona Nemiphumo emibi yeNolvadex ezinokukukhathaza. Kodwa, akukho nto ithetha ukuba xa uqala ukuyithatha, kufuneka ufumane iziphumo zecala laseNolvadex. Uninzi lwexesha, ungeke uhlupheke nakwezinye zazo.
Ngokuqhelekileyo, iziphumo zecala le-Nolvadex ziqikelelwa ngokuza kwazo kunye nokuba uza kuba nexesha elingakanani kuzo. Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba iziphumo zempembelelo zihlala zihlaziywa kwaye zihlala zihamba xa usenziwa ngonyango.
Emva kokuba uphulaphule umzimba wakho, uya kufunda ukuba imiphumo emibi ingaba nzima phantsi kweemeko ezithile, kwaye unokunciphisa okanye uthintele ngokwenza utshintsho oluthile. Ezinye zeempembelelo eziqhelekileyo zibandakanya;
Akukho mntu ufuna ukukwenza kakubi embhedeni, ingakumbi ukuba wenze kakuhle. Nangona enye yeenzuzo ze-Nolvadex kukuba iyakwandisa amanqanaba e-testosterone, nayo iyakwazi ukunciphisa isondo somntu ngesondo. Uphando olwenziwe lubonise ukuba abanye abasebenzisi be-Nolvadex bekhalaza nge-libido ephantsi, ngelixa kwabanye, kungabikho.
Ukunyuka kweenwele kunokuba intlungu. Ngelishwa, kuyinto eyenzeka rhoqo ngokusetyenziswa kweNolvadex.
Ukuvulela ezandleni, ezinqeni nasezinyaweni
Nazi iziphumo zecala le-Nolvadex ezidinga ukunakekelwa kwangoko kunyango;
Utshintsho kumbono wakho
Ukuziva ucinezelekile (awukwazi ukwenza imisebenzi yakho yemihla ngemihla ngokuqhelekileyo)
I-nausea (ukungakwazi ukutya okanye ukuziva ukhululekile nangona emva kokuthatha unyango omiselweyo)
Ukukhutshwa kwamanzi okugqithiseleyo okuhamba kunye nokuphuma kwegazi, intlungu kunye nezitenxo zokuya esikhathini
Izibilini ezintsha zebele.
Ukuvuvukala, intlungu, okanye ubomvu komnye wemilenze okanye iingalo kwaye akukho enye
7. Inzuzo yeNolvadex
Uninzi lwabantu aluboni i-gynecomastia okanye i-boobs yamadoda njengesimo esinzima, kodwa ngokwenene yinto. Kukuphuhliswa kwamathambo esifuba kumadoda. Ngokuqhelekileyo, kubangelwa utshintsho kwiihomoni zomntu ngenxa yezinto ezifana nobudala okanye ukusebenzisa i-steroids.
Kule meko, ukunyuka kwe-estrogen / testosterone ratio kungabangela isizathu. Kwakhona, ukwanda kwe-estrogenic okanye ukunciphisa i-androgenic ukuvuselela nge-estrogen okanye ukusebenzisana kwe-androgen kungabangela.
Amadoda aphethwe yiyo ayiboni kuphela ukutshintsha kwindlela ebonakala ngayo, kodwa ingabangela ubungozi kwengqondo kubo. Ngaphandle kokulahlekelwa yintembelo yabo, kunokukwenza uxinezeleke kwiqondo lokufuna ukuzifihla. Okubi nakakhulu, kungenza umntu azame nzima ukuwafihla ngokuya kwiingubo ezingaphezulu kunye nokuphepha izinto ezinokuthi ziveze imizimba yazo, oko kukuthi ukubhukuda.
Namhlanje, amadoda amaninzi analo mqathango ahlala ekhangele isisombululo esihlala njalo. Into enhle kukuba, enye ye Inzuzo yeNolvadex kukuba kukunciphisa amabele angaphezu kwamandla ngaphandle kokwenza kube nemiphumo emibi kakhulu. I-Nolvadex, ngoko, inika ukhetho olukhuselekileyo nolunempumelelo kunyango lwezinye iimeko ze-gynecomastia.
Ukwandisa ubunzima bomzimba
Inkqubo yokufumana ubunzima bemisipha ibonakala ingabi nzima. Konke okuceliwe kuwe kukuphakamisa izisindo, kulungele ukutya okufanelekileyo, kwaye uthabathe izongezelelo ezingcono kakhulu zokwakha umzimba. Ngaba uye wazibuza ukuba unokwenza ntoni xa ushaya i-plateau? Yiyiphi imveliso onokuyisebenzisa xa ufuna ukukhupha kuyo? Unokwandisa njani ukukhula kwemisipha yakho?
Inyaniso yokuba enye ye-Nolvadex isebenzisa ukwandisa i-testosterone emzimbeni yenza ukuba kube yinto efanelekileyo ukuba ufuna ukwandisa ubunzima bomzimba wakho. Yenza oku ngokusebenza kwe hypothalamus kunye ne-pituitary gland kwingqondo. Oku kukhokelela ekunyuseni kwimveliso ye-Follicle-stimulating hormone (FSH) kunye ne-Luteinizing hormone (LH), leyo leyo ikhuthaza ukuveliswa kweTestrosterone ngabavavanyo.
Isitatisti, ukuba umntu uthatha i-20mg Nolvadex iintsuku ezilishumi, izinga le testosterone egazini labo liyakwandiswa ngu-41%. Ukuba isetyenziselwa iiveki ezintandathu, amazinga e-testosterone ayenokuphakama njenge-84%.
I-Testosterone yi-hormone eyenziwa ngokusemthethweni emzimbeni. Inceda ekuphuculeni i-protein ye-muscle, phakathi kwezinye iindima. Imiba eyahlukahlukeneyo inokubangela ukuba umthamo we testosterone ungathinteli. Ukukhusela oku, ungasebenzisa iNolvadex ukwandisa umveliso we testosterone.
I-Nolvadex enye ye-SERMs engeyi-steroidal, ngoko ibonisa i-Estrogenic ephikisanayo kunye ne-estrogenic agonist emzimbeni. Oko kuthetha ukuba kwezinye iindawo, kunokukhokelela kwimiphumo ye-estrogen xa kunjalo, kunokukhokelela kwimpembelelo ye-antiestrogenic. Esinye seziphumo ezinjalo kukunyuka kwimveliso ye testosterone. Iyanciphisa nemiphumo ye-estrogen emzimbeni.
Kungenxa yesi sizathu sokuba i-Nolvadex ithathwa njengento ebalulekileyo xa umntu efuna ukuthatha unyango lwe-post cycle. Kungenxa yokuba emva kokuqhuba umjikelezo we-anabolics steroids, bayakuguqula ibe yi-estrogen. Ngenxa yoko, umntu unokufumana i-boobs yamadoda, oko kuthetha ukuba ukuzuza kwakho kuya kuchitha inkunkuma. Ngokuvimbela i-estrogen, loo miphumo yecala igcinwa. Amanqanaba e-testosterone abuyele ngokuqhelekileyo ngenxa yokusetyenziswa kwe-Nolvadex.
Ngokuqhelekileyo, i-Nolvadex ilawulwa ngokukhawuleza emva kokuba zonke i-anabolic steroids zisuswe kumzimba womntu. Omnye kufuneka athathe i-20-40mg imihla ngemihla kwiiveki ezine ukuya ezintandathu. Naliphi na inani eliphakamileyo kunelo linganiki nawuphi umphumo obalulekileyo.
Ngexesha le-PCT, i-Nolvadex ilawulwa kunye kunye ubuncinane omnye okanye ezimbini ze-Testosterone ezivuselela izixhobo ezifana ne-aromatase inhibitor njenge-HCG okanye i-Aromasin. Ubuncedo bokubasebenzisa kunye kukuphucula iziphumo kunye nokukhuthaza umsebenzi we-HPTA.
Ukusetyenziswa kwe-Nolvadex ngexesha lomjikelo kufuneka, ke, kufuneka ugwenywe ukuba unenjongo yokuchasana nokunciphisa iTettosterone kuba kuya kusenokungasebenzi. Oku kuthetha ukuba imali yakho iya kuhlahla.
Ngokungafani neminyaka ethile edlulileyo, ukulahlekelwa isisindo ngoku kuthathwa njengeyodwa yeetitikiti zokujonga kakuhle. Ngaphandle kokuba neentsimbi zijika, ukulahlekelwa isisindo kunokuthetha ukuba ufuna ukuphilisa. Ukususa iikhalori ezingaphezulu, kunjalo, akuyona into elula. Enye yeendlela onokuphumelela ngayo uhambo lwakho lokulahleka kwesisindo ngukusetyenziswa kweNolvadex.
Izifundo zenziwe Iziphumo zeNolvadex ukulahleka kwesisindo kuboniswe ukuba isebenzayo kunye neninzi yeepropati zayo ezibangela ukulawulwa kwesisindo. Ngokuqhelekileyo, i-Nolvadex iboniswe ukuba inako ukunceda umzimba ukuba utshise amaninzi xa i-metabolism ikhaba. Ikhokelela ekuphuculeni umsebenzi wepololythi ngoko ke ukunyuka kokutshiswa kwamafutha.
Kanye kunye ne-Clenbuterol, kunokukhokelela ekunciphiseni komsebenzi we-lipoprotein lipase owona mfuneko ye-enzyme kwi-metabolism ye-triglyceride. Bobabini, ngoko, banokusebenza njengemithi yokulahlekelwa isisindo. Ukongezelela, I-Nolvadex yaziwa ngokunyusa amandla omzimba ukutshisa amafutha kunye nokukhuthaza amanqanaba ombane okubalulekileyo kwinkqubo yokutshisa amafutha.
Iqinisa umsebenzi we-immune system
Xa sithetha ngomzimba we-immune, sibhekisele ekukwazi ukulwa nezifo nezifo. Ininzi engaziwayo, i-Nolvadex inefuthe elihle kumzimba womzimba.
8. Uhlolo lweNolvadex
U-Alexandra M. uthi, "Ndiye ndasebenza kwiinyanga ezintandathu zokugqibela, kwaye ukuguqulwa komzimba kwakungekho kangangoko ndikulindele. Ndaqala ukukhangela into eyayinokunyusa umxhasi wam oscle kwaye ihlaliswe ku-Nolvadex. Iziphumo ze-Nolvadex ziyamnandi nje. Ubunzima bam muscle bunyukile, kwaye ndivakalelwa kukuba le mveliso ifanele ibulelwe ngokufanayo. Ndiyincoma kunoma yimuphi umntu ofuna ukuba nemisipha emikhulu. "
Iipilisi zokulahlekelwa kwesisindo esihle
UPriscilla K uthi, "Emva kokuphanda amaninzi, ndafumanisa ukuba enye yeenzuzo ze-Nolvadex yilahleko. Andizange ndilinde ukuba ndizame, kwaye ngoko nangoko ndayilawula apha; Ndifumene iphakheji yam ngosuku. Kuze kube ngoku ndilahlekelwe iikhilogram ezilishumi, kwaye andikaze ndibe nolonwabo. Ngoku uye waba yindleko yokulahleka kwamachiza, kunye nabahlobo bam kunye nosapho bafuna ukuzama. Andizange ndihlupheke kuyo nayiphi na imiphumo ye-Nolvadex kude kube ngoku, ngokungafani noko ndahamba ngayo xa ndisebenzisa ezinye iziyobisi ezilahlekileyo. Ukuba ufuna ukugalela ubuninzi ngaphandle kwengqondo yakho nentliziyo yakho, kufuneka uNolvadex uhambe. "
ULeila Wagner uthi, "Ndandifumana isimangaliso sam Nolvadex ngesonto eledlule. Ndibuza ukuba yintoni ummangaliso onokuyenza? Emva kokuzama ukukhulelwa iminyaka elishumi edlulileyo ngaphandle kwenhlanhla, ekugqibeleni ndavavanywa kakuhle ngeNolvadex, kwaye ngoku ndiphethe inqwaba yolonwabo. Andiqinisekanga ukuba ngaba ndiyakwazi ukuthwala ixesha elide, kwaye ndivuyiswa kukuba ekugqibeleni ndenza. Ndisengakholelwa, kwaye ndanditsho nje umntwana wam ummangaliso. Nabani na ozama ukukhulelwa kufuneka anike uNolvadex umzamo. "
UCassie Houston uthi, "Ndiyalela le mveliso kumyeni wam ngenxa yokuba wayeqale ukuhlakulela amabele ngenxa yokusebenzisa i-steroids. Kwamthintela kangangokuba waze wahamba ngokugula ngenxa yeentloni. I-libido yakhe yayiphantsi, kwaye, kwaye sasisayikujabulela ukuhlala kunye. Emva kokukule mveliso, uthi iziphumo ze-Nolvadex ziyamangalisa. Yonke into sele iphendulelwe, kwaye ibuyele eqhelekileyo. Ama-boobs anciphise kakhulu, kwaye ubuyela emsebenzini. I-libido ngoku iphezulu kakhulu. Ndiyakholwa yile PCT engcono kakhulu eya kunika iTestosterone yakho amandla. "
9. Nolvadex ukuthengiswa
Unokufuna ukuthenga i-Nolvadex powder njengezidakamizwa ze-PCT okanye ukujongana nokungabikho kwengqondo. Kwakhona, unokusukela ekuphandeleni ukuba nemisipha emikhulu okanye ufuna ukufumana ubunzima ngokukhawuleza kwaye kulula. Umbuzo oyintloko apho ungayifumana khona?
Enye yeyona mibuzo ixhaphakileyo abantu abayifunayo apho bangayithenga khona i-Nolvadex powder. Ungayithengi kuphela kodwa ufumane enye enobungakanani obuhle kunye nexabiso elihle. Ukuqwalasela ukuba kukho iindlela ezininzi ezifumaneka kwi-intanethi ongayithenga kuyo, awukwazi ukuba yiyiphi na inika uNolvadex ekhuselekileyo.
Ukuze uqiniseke ukuba uyithenga into efanelekileyo, unokukhetha ukuthenga Nolvadex ukuthengiswa kuthi. Unokuthenga kwakhona i-Nolvadex ngobuninzi kwixabiso elifanelekileyo ukuba injongo yakho iyithengisa. Into enhle kukuba nge-Nolvadex yethu, akukho nto yokufumana izilonda zesisu okanye utyhefu kuyo; yinyani uNolvadex.
10. I-Nolvadex ukunyanga ukungabikho komntwana kwintombi
Ngaba unenkathazo yokukhulelwa kunye nokuziva uxinezelekile? Awukho wedwa. Izibalo zibonisa ukuba malunga ne-7% yabasetyhini abasetyhini banemiba yokungapheliyo emhlabeni jikelele. Akunjalo, oko kuthethe ukuba ukuba umntu unenkathazo, abayi kuba nethuba lokubamba umntwana wabo.
Enye yezinto eziphambili ezibangela ukungabikho kwintsholongwane. Zingabangelwa yi-polycystic syndrome syndrome, ebonakaliswa ukungalingani kwe-hormone ngoko kukuphazamisa ukuvuthwa okuqhelekileyo. Iindaba ezilungileyo zikhona amayeza anikezwa ngomlomo okanye ngejojo ​​encedisa umntu ukuvelisa amaqanda ukuba sele ejongene naluphi na ubunzima. Ngoko ke, banyuse amathuba okwenyuka kwe-ovulation.
Ngalokhu, umntu unokukwenza ixesha elichanekileyo ngoku kuphucula amathuba okukhulelwa. Enye ye Tamoxifen iCitrate powder Inzuzo kukuba ibonakalise ukukhuthaza i-ovulation ngokufanelekileyo. Kwakhona, ivuselela ii-ovari ukuvelisa amaqanda amaninzi ukuba umntu uvelise enye. Inzuzo kunye nayo kukuba ukusetyenziswa kwayo akukona njengendleko kwaye inobungozi ezifana nokusetyenziswa kwegonadotropin (iyeza zokuvuthwa kwe-ovulation).
I-Clomid iwela kwiklasi efanayo neNolvadex, kwaye zombini isetyenziselwa ukunyanga iingxaki ze-ovulatory kubasetyhini abangenabantwana. Basebenza ngendlela efanayo kwaye baqinisekisile ukunceda ukunyusa i-ovulation kwi-65-75% yabasetyhini. I-Clomid, nangona kunjalo, iza neempembelelo ezinjenge-thinning ye-endometrial lining hence ayikwazi ukukhulelwa. Ngakolunye uhlangothi, akukho ziphumo ezenziwe kwiimpawu zecala zeNolvadex kwisibeleko.
Tamoxifen: Ngaphandle kweAntiestrogen, nguJohn A. Kellen, iphepha 1-201
UJohn F. Kessler, uGreg A. Annussek, uHarperCollins, 6 ngo-Epreli 1999, 1-208
I-Tamoxifen, uGqr. Titus Marcus, Ishicilelwe ngokuzimeleyo, i-29thNgoMatshi 2019, 1-18